काठमाडौं, साउन १ । बहुुमतका नाममा सरकारले अधिनायकवादी रबैया देखाएको भन्दै मुख्य विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद र सडक संघर्षका कार्यक्रम अघि सारेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसनरत डा. गोविन्द केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता तथा सरकारको अधिनायकबादी शैलीविरुद्ध काँग्रेसले साउन ३ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।
पार्टी मुख्यालय सानेपामा आज बिहान पार्टीका भातृ तथा शुुभेच्छुक संस्थाका प्रमुुखहरुसंगको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । बैठकले साउन ३, ५ र ८ गते दिउँसो १ बजे काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ ।त्यसक्रममा साउन १५ गते ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरिने जनाएकाे छ ।
३ गते प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल र प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघको अगुवाइमा ५ गते तरुण दलको अगुवाइमा र ८ गते कांग्रेसको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला समितिको अगुवाइमा विरोध प्रदर्शनको निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै साउन १५ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्न पार्टीका सबै तहका समितिहरुलाई निर्देशन दिएको छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट चलिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
विरोध प्रदर्शनमा काँग्रेसले आफ्ना सबै भातृ तथा शुुभेच्छुक संस्थाका सदस्यहरुलाई अनिवार्य उपस्थित हुनसमेत निर्देशन दिएको छ । काँग्रेस उपसभापति निधिले सरकारले चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक कसैको स्वार्थमा ल्याएको भन्दै त्यसकाविरुद्ध आन्दोलनमा जानु परेको बताएका छन् ।